စက်မှုသန့်စင်တိုက်တေနီယမ်: စက်မှုသန့်စင်တိုက်တေနီယမ်၏မသန့်ရှင်းသောအကြောင်းအရာသည်ဓာတုသန့်စင်သောတိုက်တေနီယမ်ထက်ပိုများသည်, ထို့ကြောင့်၎င်း၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်မာကျောမှုသည်အနည်းငယ်ပိုမြင့်သည်. ၎င်း၏စက်မှုနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများသည်သံမဏိသံမဏိများနှင့်ဆင်တူသည်. တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သန့်စင်သောတိုက်တေနီယမ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစွမ်းသတ္တိရှိပြီးဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ၎င်းသည် austenitic stainless steel ထက်ပိုကောင်းသည်, ဒါပေမယ့်အပူခံနိုင်ရည်အားနည်းတယ်. TA1, TA2, TA3 သည်မသန့်ရှင်းသောအကြောင်းအရာများတွင်တိုးလာသည်, စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနှင့်မာကျောမှုသည်အစဉ်လိုက်မြင့်တက်လာသည်, ဒါပေမယ့်ပလတ်စတစ်တွေရဲ့အကြမ်းခံမှုကအစဉ်လိုက်ကျဆင်းသွားတယ်.
treatment အမျိုးအစားတိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းကိုအပူကုသမှုဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းစေနိုင်သည်, မြင့်မားသောအလွိုင်းအစွမ်းသတ္တိနှင့်အတူ, ကောင်းသော weldability နှင့်ဖိအားအလုပ်လုပ်နိုင်မှု, သို့သော်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်မတည်မငြိမ် ဖြစ်၍ အရည်ပျော်မှုဖြစ်စဉ်သည်ရှုပ်ထွေးသည်.
မျက်မှန်ပြား (တိုက်တေနီယမ်စစ်စစ်): 0.8-8.0မီလီမီတာ
စံပြား (တိုက်တေနီယမ်စစ်စစ်): 1 x 2m အထူ: 0.5-20မီလီမီတာ
ပန်းကန်ပြားများနှင့်အခြားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည် (တိုက်တေနီယမ်စစ်စစ်): 0.1-50မီလီမီတာ
အသုံးပြုသည်: လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ဓာတုပစ္စည်းများ, နာရီ, မျက်မှန်, လက်ဝတ်ရတနာ, အားကစားပစ္စည်းများ, စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ, ဂေါက်နှင့်တိကျသောအပြောင်းအလဲလုပ်ငန်းများ.
Shaanxi Zhongbeitai ပစ်မှတ် Sputtering ပစ်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် sputtering ပစ်မှတ်အမျိုးမျိုးကိုအထူးပြုသည် (high-purity target/alloy target/single target ဖြစ်သည်) (လှည့်ပတ်နေသည့်ပစ်မှတ်/ပျံသန်းမည့်ပစ်မှတ်), ဖောက်သည်များအားကြေးနီကျောထောက်နောက်ခံနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် Set.Product များကိုအဓိကအားဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်သုံးသည်, flat panel display လုပ်ငန်း, low-e ဖန်လုပ်ငန်း, အလှဆင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းနှင့်အခြားနယ်ပယ်များ.
အကြို: 2021 တရုတ် Titanium Valley အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုက်တေနီယမ်စက်မှုကုန်စည်ပြပွဲစတင်ပါပြီ